10 Yakakosha Kufunga kweBig Data Kubatanidza - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Iyo data yakwanisa kushandura nyika uye kunyanya bhizinesi munda nezvinodiwa zvezuva nezuva ichiri kuumbiridza ramangwana renyika rekuongorora, hombe data, uye chaiyo-nguva mashandiro. Kuti izvi zviitike, zvakakosha kufunga nezvazvo nekuvandudza iyo Data management, hunyanzvi, zvikwata, uye zvigadzirwa.
Maitiro ekuita neBig Data Kubatanidzwa?
Kubatanidzwa kwedata inotamba basa rakakura mukugadzirisa, kuunganidza uye kufambisa data kungave kwekare kana kutsva. Iwe unogona kutaura kuti kusanganiswa kwedatha chidimbu chinoratidzika chemhinduro. Big Data inoshandiswa kune akaomarara uye makuru data-seti umo maapplication akamboshandiswa pakutanga haana kukwana. Nekudaro, kuita kusangana kwedata pane yakakura seti inzira yakaoma. Nekudaro, zvisinei nekuti rudzii rwechishandiso rwunoshandiswa, zvakakosha kuve nekururama sezvo izvo zvichizoguma mukuita kuri nani kwesarudzo.
Ida zvaunoverenga? Zvino chitsva chidimbu chemukati iko pano.
Heano mashoma akakosha mapoinzi ayo akawanda anotariswa panguva yekubata nekubata kukuru kwedhata.
Read More: Zvikonzero gumi nei Big Data Kunzwisisa kuri kudiwa kweawa
1. Zvishoma zvinogara zvakanyanya
Imi mose mungangodaro makanzwa kuti zvimwe zviri nani maererano ne data. Zvakanaka, handizvo nguva dzose. Izvo zvinowedzera zvinogona kuve zvakaoma, zvinoshungurudza uye kana iyo hombe huwandu hwedata husina basa saka zvichanetsa kuwana mhedzisiro uye nekupa zvisirizvo manyepo. Nekudaro, iyo yakawanda data inoratidza zvakare kuti iyo yekukanganisa mwero ichave ishoma kusvika zero iyo ichazopa iri nani uye inoenderana modhi. Iko kune mukana wekuti iwe uchakwanisa kuona iwo matsva mafambiro uye zvisina kufanira zvinobatsira mu kutaurirana uye kugadziriswa kweruzivo rwakakodzera kunouya neiyo yakawanda data chete pachinzvimbo cheimwe yakasarudzika sampuro yedata yakatarwa.
Uyewo Verenga: 21 Statistics uye Kufembera pane ramangwana reBig Data
2. Reuse Data
Dhata yakaenzana nezvinhu zvisikwa zvemakambani. Haufanire kunetseka kuti ichapera mushure mekushandisa kamwe chete sezvazvisiri izvo. Kune nzira dzakawanda kwazvo dzisingatarisirwi dzaungashandise zvakare iyo data uye yaunogona kupa inogona kuwana mhinduro kumatambudziko akati wandei uye naiyowo mune imwe nguva yenguva. Iko kune enhoroondo dhata maseva anoratidza iko kunyatso kushandiswa kwerudzi urwu. Iyo yekare dhata inogadziriswazve uye inoshandiswa zvekare nenzira isingatsanangurike kune yechinyakare muteresi. Nekudaro, shandisa zvakare iyo data nekufunga kunze kwebhokisi uye usatombofunga kuti kutambisa nguva. Nzira dzese dzinoita kuti iwe usvike kune imwe nzvimbo.
Uyewo Verenga: 6 Anesimba Big Dhata Models kutsanangura zvine simba njere
3. Tora Dhata seAseti
Dhata ine kukosha kwayo pachedu kubva panzira yechinyakare yekumhanyisa bhizinesi kune fomu yazvino. Iyo mhando yesosi ine chaiyo uye inoongororwa tsika. Yako data ichakubatsira iwe mukuita sarudzo mune ramangwana uye inozopedzisira yabatsira neako kugadzirwa kukura. Nekudaro, kana iwe uchida kutora sarudzo dzinoenderana nenguva saka, zvakakosha kuti iwe utore iyo chaiyo-nguva data nenzira kwayo chikanganiso chimwe chete chingakutorere mari yakawanda. Naizvozvo, ita shuwa kuti uchengetedze uye chengetedza iyo data nenzira iyo iwe yaunogona kuiwana chero iwe paunoda.
Uyewo Verenga: 12 Kufunga kwakakosha paunenge uchisarudza Big Data Technology stack
4. Musiyano uripo pakati peKuwirirana uye Kukonzera
Pane musiyano pakati pekukonzera uye kuwirirana. Kana iwe uri kuona kuwedzera mukutengesa saka kuziva chikonzero kunogona kungouya kunobatsira asi hakugone kukubatsira kuronga marongero ekuvandudza kutengesa mune ramangwana zvakare. Correlation inogona kucherechedzwa senge yakachipa uye inokurumidza nzira kwete pane izvo zvinokonzera zvikonzero. Big Data inobatsira kuona mhando yemusiyano iyo ichave yakanakira kutengesa kwemberi sezvo ichinyatso kutitaurira zvinodiwa nemutengi. Nerubatsiro rweizvi, bhizinesi rinogona kuwedzera kana kudzikisa kukosha kuti riwedzere kutengesa uye kukosha kwekubuda. Iyo hombe data inoita kuti tirege kunetseka nezve chikonzero (icho chingave chiri kunze kwekudzora) uye chinobatsira mukutarisa pane kuwirirana kuburikidza neiri nani bhizinesi kuita kunogona kufanofungidzirwa.
Uyewo Verenga: 5 Makwikwi Makomborero eBig Data muBhizinesi
5. Iko kushandiswa kunoisa Kukosha kweData
Iko kushandiswa uye kushandiswazve kwedata kunozivisa kukosha kweiyo hombe data. Iko kukosha kunowanzo sarudzwa kana huwandu hwedata-seti hwakasanganiswa pamwe chete kuti uone mhinduro yemibvunzo. Nekudaro, nerubatsiro rweakakura data, iyo svumbunuro yedata inobata yakaderera kukosha kupfuura mhinduro sezvo ichisarudza iyo chaiyo bhizinesi kugadzirwa.
Uyewo Verenga: 7 Matanho ekugadzira rakabudirira Big Data zano
6. Njodzi Inobatanidzwa
Kune zvinhu zvakawandisa mune iyo hombe data iyo inowedzera njodzi chinhu cheiyo hombe data. Iyo data chinhu chakasimba chebhizimusi chinoita kuti chiono chakanangana neramangwana zvive nyore izvo zvinogona kufanofungidzirwa uye zvine simba zvakanyanya nekuda kwesimba resimba. Kuita kuti zvinhu zvinyatsojeka, ongororo yacho inoenderana nenhamba uye nzira idzo mushandisi adudzira nadzo. Nekudaro, mhedzisiro inogona kunge isina kurongeka, algorithms mis-akaongororwa uye anotsausa manhamba. Naizvozvo, zvakakosha kururamisa njodzi nerubatsiro rwekunzwisisa kwedambudziko nekukanganisa kwedata hombe.
Uyewo Verenga: Attribution Modeling: Inoita sei iyo yakanakisa kunze kweData
7. Kufungisisa Dhata Yemhando
Iko kunaka kwe data kunoonekwa sechinhu chakakosha. Mune chero sangano, ongororo inogona kukanganisika nekuda kwehunhu husina kunaka hwe data-set. Nekudaro, kune rakakura dhata, iro dhata mhando rakakuvadzwa nekuda kweiyo semi-yakarongedzwa uye isina kurongeka dhata inoshandiswa kune iyo data seti yekubatanidza. Zve kugadzirisa data, zvakakosha kuve neyakanaka data kana yakagadziriswa data iyo inogona kupa chaiyo mhedzisiro. Kana danho iri risingateedzerwe ipapo zvinokwanisika kuti zvakaburitswa zvichamonyoroka izvo zvinogona kukanganisa bhizinesi rekuongorora system nenzira yakaipa.
Uyewo Verenga: 4 Nzira sei Big Data Automation iri kuchinja Data sainzi
8. Yakashata Contextual Dhata
Mamiriro ezvinhu edata ndiwo akakosha manzwiro kumashure kwekuita zvinyorwa analytics uye kugadzirisa data rezvinhu. Kana mamiriro ezvinhu akadzivirirwa saka zvinokwanisika kuti iyo data yakaenderera mberi ichave nezvakawanda zvisiri izvo uye ichaburitsa mhinduro dzakamonyoroka.
9. Kwete Kunzwisisa Kuomarara kweData
Big data inoumbwa nematanho mazhinji akasanganiswa nekuoma kunzwisisa kusinga tsanangurike nekutarisa kuri nyore. Aya marudzi ekuomarara ari mu data nekuda kwemafomati, chimiro, metadata, uye zvemukati. Kana iwe usinganzwisise kuoma kwega kwega kweiyo modhi iyo inoshandiswa kune nhamba, zvinyorwa zvemigodhi uye ongororo yemasvomhu mhedzisiro yacho ichave isina kunaka.
Uyewo Verenga: 8 Mazano ekuti unyatsoshandisa yako Big Data
10. Gamuchira Zvishandiso zveData Nyowani nemaitiro ekugadzirira kweData
Kune mazita akawanda kwazvo ekutsanangura iyo pfungwa yekugadzirira dhata, inoshandiswa senge data unging, kupokana kwedata, DI mwenje, uye data kusanganisa. Zvisinei nezita, unogona kugadzirira iyo data uchishandisa maturusi akasiyana senge profiling, kusangana, analytics, kuongorora, uye kuona.
Kugadzirira kwedhata kwekubatanidza ndiyo nzira inoshandiswa nevasayendisiti ve data kuti vaone mhedzisiro yakakodzera pavanenge vachishanda pane tsime. Iyo data inoongororwawo iyo ndiyo yakakosha chikamu cheiyo data yekubatanidza yazvino maitiro. Iwo analytics uye data masayendisiti zvikwata zvinoshanda kuti vaone akakosheswa machunks echiono kuseri kwedata rakavanzwa. Mumwe muenzaniso wakadai ndewekunze izvo zvinongedzo zvinoshandiswa kuchikamu chitsva chevatengi. Kune akawanda mazuva ano maitiro ekugadzirira uye maturusi anodikanwa nekuda kwekuchinja kwavo, nekukurumidza uye nyore kunzwisisa maitiro. Vanoitawo kuti kutsvaga kwedatha kuve nyore uye kukurudzira vanhu kuti vadaro.
Uyewo Verenga: 5 Vhura Sosi Big Data maturusi
Kune nzira dzakawanda dzekuvandudza dhata rekubatanidza.
Iwe unogona kusanganisa dhata remasevhisi ako ega sekuchengeta dhata zvakanangana mudura rako, dhata dhata kana zvivakwa zvinogona kugarwa nehukama dhatabhesi, Hadoop, uye mafaera masisitimu.
Iwe unogona kuvimba nemidziyo yako wega iyo inogona kuita kuti zvive nyore kuratidza yako bhizinesi-inoshamwaridzika data kuona. Iyo zvakare inovhura iyo yekugadzirira uye yekuzvishandira-yega kuwana.
Paunenge uchishanda uchienda mukubatanidzwa kwedata mazuva ano, zvakakosha kuti ushande zvakanyanya pane iyo data kutora uye kugadzirisa iyo nyowani data yakatarwa nerubatsiro rweakawanda maturusi uye nekukurumidza kumhanya. Izvi zvinotora kutarisisa kwako kune zvekare nzira dzaunogona kuita shoma kugadzirisa uye DI mhinduro.
Zvakare, pane icho chinangwa chayo chekutora dhata-set mune yepakutanga fomati. Iyo inogona kubatsira mukugadzirira mushumo, kuongorora iyo data, uye kuseta mashandiro nenzira kwayo. Netekinoroji yepamberi, pane nzira dzakawanda kwazvo idzo idzo dzinogona kuwanikwa zviri nyore pane kumhanya kwaunoda. Shanduko idzi dzinogona kukupa iwe chaiyo chaiyo mhedzisiro inogona kubatsira kuona rakakodzera bhizinesi zano uye negoho.
Unoda kuwana chirongwa paBig Data chakaitwa? Wobva wasvika kwatiri kuti ubvunze.